Midowga Afrika oo beeniyey in ciidamad Amisom kufsadeen dumar Soomaaliyeed | shumis.net
Home » galmada » Midowga Afrika oo beeniyey in ciidamad Amisom kufsadeen dumar Soomaaliyeed
Ururka Midowga Afrka ayaa beeniyay warbixintii hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo ahayd inay ciidamada AMISOM xadgudubyo galmo ah ka geystaan Soomaaliya.
War-saxaafadeed kasoo baxay xarunta ururka Midowga Afrika ayaa lagu sheegay in aysan ciidamadoodu jooga Soomaaliya geysan xadgudubyo galmo ah, iyagoo sheegay inay sameynayaan baaritaanno ku aaddan arrintan haddii ay run noqotana ay tallaabo ka qaadi doonaan askartii ku kacay falkaas.
“Eedeymaha noocan oo kale ah ma ahan kuwo loo dulqaadan karo. Warkana ma ahan mid dhiilli-tiran oo lagu kalsoonaan karo,” ayaa lagu yiri warbixinta Midowga Afrika, iyagoo ku tilmaamay in tani ay tahay mid askartooda lagu ceebeynayo.
Sidoo kale, warbixinta ururka ayaa lagu sheegay in hay’adda HRW ay lambar yar oo kiisaskan ay soo qaadatay, iyadoo ku sheegtay in 21 haween ah ay la kulantay, kuwaasoo qaarkood askar badan ay si naxariis-darro ah kufsi ugu geysteen, balse lama caddeyn ciidamada kufsiga geystay cidda ay yihiin.
“Ma ahanayn warbixinta mid ku qotonta baaris dhameystiran oo falalkaan lagu sameeyay. Waxaan u aragnaa inay tahay mid la dhoodhoobay,” ayaa lagu yiri warbixinta Midowga Afrika uu soo saaray.
Ra’iisul wasaaraha Somalia, C/weli Shiikh Axmed ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay eedeymaha la xiriira falalka galmada ah ee lagu sheegay warbixintii Human Rights Watch taasoo ay geysteen ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ku sugan.
C/weli Sheekh ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay cambaaareynayso dhammaan noocyada xad-gudub ah ee dhanka ka ah dadka Soomaaliyeed, waxaana naga go’an buu yiri inaan xaqiijinno ciddii ku kacday falkaas si cadaaladda loo horkeeno.
“Xukuumaddu waxay ku sameyn doontaa eedeymahan baaritaan qoto-dheer oo deg-deg ah, waxaana qaadaynaa tallaabo lagama maarmaan ah sidii loo eedeymahan lagu xaqiijin lahaa. Waxaana naga go’an ilaalinta xuquuqda shacabkeenna, gaar ahaan haweenka iyo carruurta,” ayaa lagu yiri warbixin kasoo baxday xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Sidoo kale, warbixinta ayaa lagu sheegay in xadgudubyada noocan oo kale ah ee dhiig-miiradka ah aanay dowladdu aqbali doonin, lana ilaalin doono dhammaan xuquuqda shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa nugul.
“Dowladda Soomaaliya waxay weydiisanaysaa AMISOM iyo waddamada ay ka socdaan ciidamada inay ka qaybqaataan ilaalinta xuquuqda shacabkeena iyo inay ka qaybqaataan baaritaanka lagu xaqiijinayo kuwii xadgudubyada ku kacay,” ayuu lagu yiri warbixinta.
Waxaa kaloo warbixinta lagu yiri. “Shacabka Soomaaliyeed waxay mudan yihiin nolol xor ka ah argagixisada, dhammaanna waa inay doorka ku yeeshaan hirgelinta, kormeerka iyo u doodidda kuwa jilicsan.”
Ugu dambeyn, ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku celiyay inay xukuumadda ka go’an tahay in caddaaladda la horkeeno cid walba oo ku lug yeesha eedeymaha galmada ah.
Title: Midowga Afrika oo beeniyey in ciidamad Amisom kufsadeen dumar Soomaaliyeed